Fandikana fepetra amin'ny fitaterana :: Mpamily valo amby dimampolo nampidirina fonjakely • AoRaha
Nalain’ny polisy, avy eo nampidirina fonjakely avy hatrany, ireo mpamily sy mpamily mpanampy tamin’ny taksibe tratra tsy nanara-dalàna momba ny fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy arahina amin’izao ady amin’ny valanaretina izao. Mpamily sy ny mpanampy valo amby dimampolo no voasambotra teto an-drenivohitra, omaly hatramin’ny 9ora maraina. Valo amby roapolo kosa ny fiara nampidirina vala famonjana. Tsy nahazoana tatitra ireo voasazy, tamin’ny tapak’andro hariva.
Fampidirana fonjakely mandritra ny 48 ora, hatreto, no sazy ampiharina amin’ireo mpamily sy mpamily mpanampy tsy nanara-dalàna ireo. Tsy mbola voafaritra, hoy ny polisy, ny mety ho tohiny sy ny sazy hafa homena azy ireo. Misy tamin’ireo fiara ireo no nampiasa seza afovoany na « seza volamena » nefa efa voarara tsy azo ametrahana olona, amin’izao fisorohana ny Covid-19 izao. Ny sasany indray nitondra mpandeha tsy manao aron-tava sady tsy nampiasa tsiranoka mamono tsimok’aretina.
« Terena hanaraka ny fepetra rehetra, toy ny fampiasana tsiranoka mamono tsimok’aretina sy fanajana ny isan’ny mpandeha, ny mpamily ato aminay. Efa nisy ireo tratra teo aloha ary voasazy sy niakatra teny amin’ny Fitsarana mihitsy. Fay tamin’izany izy ireo ka tsy misy mandika lalàna intsony taty aoriana », hoy i Laborde Johachim Frederic, filoha lefitra ao amin’ny kaoperativa Volavita.
Milaza ny tompon’ andraikitra ao amina kaoperativa iray hafa eto an-drenivohitra fa tokony ho hendry sy hanara-dalàna hatrany ny mpitondra taksibe.
Fisolokiana Kaomiserana polisy migadra eny Antanimora
Fahafatesana tampoka Miaramila voatifitry ny basy teny an-tanany
Famitahana mpivarotra Noafahana vonjimaika ilay mompera sandoka
Herisetra Mpivady samy tsy mahatsiaro tena
Lalao nitera-doza :: Tovolahy maty voatsindrin’ny omby
Firehetana fiara :: Levon’ny afo ny kamiao iray sy ireo entana nentiny
Fivoaran’ny valanaretina Mihoatra amin’ny isan’ireo marary indray ny sitrana tamin’ny Covid-19
Fitsaboana ny covid-19 – Marary sivy amby telopolo sy dimanjato sitrana tany an-tranony
Fanasaziana hafa kely Mpangalatra nampilanjaina sora-baventy fifonana
Fanahiana famosaviana Mpianaka, 26 sy 50 taona, matin’ny fitsaram-bahoaka